ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အီတလီဘောလုံးကစားသမားများ Domenico Berardi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB သည့်အမည်ပြောင်နှင့်အတူဘောလုံးပါရမီ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက် "Mimmo"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Domenico Berardi ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသည်သင်မှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်ဆောင်ခဲ့ရမည်။
အဆိုပါအသက်နှင့် Domenico Berardi ၏မြင့်တက်။ Image ကို Credit: Sportmirtese, Castrumcropalatum နှင့် SportsMole ။
သူ့ကိုအကြောင်းကိုလူသိများအချက်အလက်များ - ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သူ၏အစောပိုင်းဘဝ, မိသားစုနောက်ခံ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ, မိသားစုအချက်အလက်များ, လူနေမှုပုံစံစတဲ့နှင့်အခြားအနည်းငယ်သာပါဝင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းအတွက်ရည်မှန်းချက်သည်မိမိဘက်စုံသုံးနှင့်မျက်စိသိတယ်။ သို့သော်သာအနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သော Domenico Berardi ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့စတင်ဖို့ကြကုန်အံ့။
Domenico Berardi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - အစောပိုင်းဘဝနှင့်မိသားစုနောက်ခံ
Domenico Berardi Cariati မှာသြဂုတ်လ 1 တောင်ပိုင်းအီတလီ၏ Calabria ဒေသတွင်း၌ Cosenza ၏ပြည်နယ်မှာမြို့များ၏ 1994st နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ သူကသူ့မိခင်မာရီယာနှင့်သူ၏ဖခင်, Luigi မှမွေးဖွားသားသမီးသုံးဦး၏အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Domenico Berardi နည်းနည်းနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်အဘယ်သူကိုမိဘများမှမွေးဖွားခဲ့သည်။ Image ကို Credit: PxHere နှင့် Sportmirtese ။
အနည်းငယ်သာသိမြစ်များနှင့်အတူအဖြူရောင်လူမျိုးစုများ၏အီတလီအမျိုးသားရေးသူသည်မိမိအစ်ကို Francesco နှင့်နှမ, Severina အတူကြီးပြင်းရာအီတလီနိုင်ငံ Cosenza ပြည်နယ်၏ Bocchigliero မြို့မှာကြီးပြင်းခဲ့သည်။
Domenico Berardi Cosenza ပြည်နယ်မှာ Bocchigliero မှာကြီးပြင်းလာတယ်။ Image ကို Credit: WorldAtlas နှင့် Sportmirtese ။
မြို့မှာကြီးပြင်း Berardi သူ့ကိုထိုရက်သတ္တပတ်၏နီးပါးတိုင်းသောနေ့၌မိမိသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဘောလုံးကစားရန်အခွင့်အလမ်းမတတ်နိုင်မယ်လို့ဆင်ခြေ၏တိုတောင်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူကတခါတရံကျောင်းကရှောင်နှင့်အားကစားကစားပျော်မွေ့နိုင်ရန်အတွက်အစာအိမ်နာရှိသည်ဖို့ဟန်ဆောင်။
Domenico Berardi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင် Buildup
တစ်ဦးဘောလုံး-မေတ္တာရှင်မိသားစုသို့မွေးဖွားခံရခြင်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, Young က Berardi Mirto မှာ Castello ဘောလုံးကျောင်းမှာစာရင်းသွင်းခဲ့သည် - Crosia တစ် Hamlet လည်း Cosenza, အီတလီ၏ခရိုင်မှာ - သူကယှဉ်ပြိုင်ဘောလုံးကွင်း၌သူ၏ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုယူဘယ်မှာ။
Domenico Berardi Castello ဘောလုံးကျောင်းမှာယှဉ်ပြိုင်ဘောလုံးကွင်း၌သူ၏ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုယူ။ Image ကို Credit: Sportmirtese နှင့် TUON ။
ကျောင်းမှာလေ့ကျင့်ရေးနေစဉ်, Berardi သင်ယူလာရန်သူ၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရည်မှန်းချက်အမှတ်ပေးပုံစံကိုရှေ့ပွေးပုံရိကြောင်း skillset ပြ။ ရလဒ်အနေနဲ့ကသူ့နည်းပြမကြာခဏသေချာရည်မှန်းချက်များအဘို့သူ့ကိုမှဘောလုံးကိုဖြတ်သန်းအပေါ်အသင်းအဖွဲ့ဝင်များတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်။
Domenico Berardi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
အချိန်ကို by Berardi 13 အတွက် 2008 အသက်ခဲ့ပါတယ်, မိမိလူငယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း (2008-2010) ၏အတိုဆုံးကာလသုံးစွဲသွားမည်ဟုဘယ်မှာ Cosenza ၏ဘောလုံးအကယ်ဒမီသို့စာရင်းသွင်းရနိုင်ရန်အတွက် Mirto မှာမိမိအပေါင်းအဘော်နှုတ်ဆက်သညျ့နိမိတျ။
Domenico Berardi နောက်ဆုံးဘောလုံးဝိသေသလက္ခဏာကဒ်သူ Cosenza ပူးပေါင်းမီ။ Image ကို Credit: Sportmirtese ။
ဖြစ်ရပ်တစ်ခုရက်သတ္တပတ်တွင်, Berardi Bodena မှာမိမိအစ်ကို Francesco ၏တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းသွားရောက်ခဲ့သည်။ ကျောင်းဝင်းမြေပေါ်တွင်နေစဉ်, သူကသူ့အစ်ကိုများနှင့်တက္ကသိုလ်အသိုင်းအဝိုင်းအခြားအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူတစ်ငါး-a-ခြမ်းဂိမ်းအတွက်စေ့စပ်တယ်။ Berardi မှ Unknowing, သူ့ကုန်ကြမ်းအခွက်တဆယ်မှတ်ချက်ယူသူဂိမ်းမှာ Sassuolo ကနေကင်းထောက်ရှိခဲ့သည်။
Domenico Berardi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - Fame ပုံပြင်ရန်လမ်း
ထို့ကြောင့်တစ်ဦး 16 နှစ်အရွယ် Berardi သူရာထူးတဆင့်မြင့်တက်ဘယ်မှာ Sassuolo မှယူဆောင်ခဲ့သည်။ Berardi Cesena ဆန့်ကျင်နေတဲ့စီးရီးအေ B ကနေစဉ်အတွင်းသြဂုတ်လ 27 ၏ 2012th ပေါ်ကလပ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအဖွဲ့ကသူ့ရဲ့ပွဲဦးထွက်ကိုဖန်ဆင်းနှင့်သူ၏ခြမ်းစီးရီးအေအေမှမြှင့်တင်ရေးဝင်ငွေကိုကူညီသှား
ရာထူးတဆင့် Berardi ရဲ့မြင့်တက်လျင်မြန်အဖြစ်အများအပြားဒဏ်ခတ်ပေမဲ့, က hard-အတွေးဆုံးဖြတ်ချက်များမပါဘဲမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဆိုပါအစာရှောင်ခြင်း-မြင့်တက်ဘောလုံးသမားသည်သူ၏လက်မှတ်ရှာကြံဥရောပအများအပြားသင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်သူကနုသည်ကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့် Sassuolo မှာရငျ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။
Domenico Berardi သည်မိမိအထင်ကြီးပုံစံနှင့်အတူပိုကြီးကလပ်ကိုဆွဲဆောင်နေသော်လည်း Sassuolo မှာရှိနေဆဲဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ Image ကို Credit: Castrumcropalatum ။
Domenico Berardi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - Fame ပုံပြင်ရန်ထလော့
နောက်ဆက်တွဲနှစ်များတွင် (2013 - 2015) Domenico အီတလီနိုင်ငံရဲ့အလားအလာအကောင်းဆုံးငယ်ရွယ်ဘောလုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်သက်သေပြခြင်းနှင့်အများဆုံးထူးချွန်ငယ်ရွယ်ဥရောပဘောလုံးသမားများအတွက် 2015 Bravo ဆုအပါအဝင်တစ်ဦးချင်းဆုများများစွာအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ပိုပြီးဘာလဲ? သူကသုံးကြိမ် 100, 2013 နှင့် 2014 အတွက်ဒွန်Balónအားဖြင့်လောကဓာတ်မှာရှိတဲ့ထိပ်တန်း 2015 ငယ်ရွယ်ကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ်စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။ အစာရှောင်ခြင်းရှေ့ဆက်အရေးအသား၏အချိန်ရန်, Berardi ထိပ်တန်းဂိုးသွင်း Sassuolo ရဲ့ All-အချိန်နှင့်ကောင်းစွာရိုးမား, စပါးနှင့်လီဗာပူးလ်အသင်းအနေဖြင့်အကျိုးစီးပွားရေးဆွဲထားပြီးကစားသမားပြီးနောက်ရှာကြံလျက်နေ၏။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့, သမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Domenico Berardi အရေးအသား၏ထိုအချိန်က Sassuolo ရဲ့အမြင့်မားဆုံးရည်မှန်းချက်ကိုဂိုးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။ Image ကို Credit: BleacherReport ။
Domenico Berardi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - relationship ဘဝကအချက်အလက်
Domenico Berardi ၏မတ်ေတာတျောဘဝနှင့် ပတ်သက်. ကိစ္စရပ်များအပေါ် Moving, တဦးတည်းကသူ့ချိန်းတွေ့သမိုင်းစာအုပ်ထဲတွင်မည်မျှအမည်များကိုရှာတှေ့နိုငျနှင့်သူ၏လက်ရှိဆက်ဆံရေးဟာ status ကိုဒီဇီဝရေးသားခြင်း၏ထိုအချိန်ကဘာလဲ
အတူစတင်, Berardi သူသည်မိမိရည်းစားနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်မတိုင်မီမည်သည့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးရက်စွဲပါရှိသည်ဟုမသိရ (ဇနီးဖြစ်) စေ့စပ်လှည့် - Francesca Fantuzzi ။ Francesca ပထမဦးဆုံးလူငယ်တစ်ဦးပွဲစဉ်ကာလအတွင်း Berardi မြင်ထို့နောက် Facebook ကနေတဆင့်သူ့ကိုအကြောင်းကြားခဲ့သည်။ သူတို့ဟာကတည်းကအစဉ်အဆက်ကွဲကွာခဲ့ကြပြီမဟုတ်နဲ့သား (s) သို့မဟုတ်သမီး (s) ကိုမကြာမီအချိန်မရွေးကြိုဆိုပါတယ်ပေလိမ့်မည်။
မိမိအစေ့စပ် Francesca Fantuzzi အတူတက်ခစျြ၏ဓာတ်ပုံ Domenico Berardi ။ Image ကို Credit: Instagram ကို။
Domenico Berardi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - မိသားစုဘဝအချက်အလက်
Domenico Berardi တစ်လူလတ်တန်းစားမိသားစုနောက်ခံကနေလာတာပါ။ ကျနော်တို့သူ့မိသားစုဘဝအကြောင်းကိုအချက်အလက်များကိုဖျောပွ။
Domenico Berardi ရဲ့အဖေအကြောင်း: Luigi Berardi ရဲ့အဖေဖြစ်ပါတယ်။ Berardi မွေးခင် Luigi အင်တာမီလန်မီလန်တစ်ဦးအသည်းအသန်ယပ်တောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်မိမိသားအဘို့ကစားရာ Sassuolo များအတွက်ပျော့အစက်အပြောက်ရှိပါတယ်။ သုံး၏ထောက်ခံအဖေဘောလုံးကွင်းအဘို့အစဉ်ဆက်မပြတ် Berardi ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကကူညီပေးခဲ့နှင့်ရက်စွဲမကုန်မှီတိုင်အောင်သူ့ကိုထောကျပံ့ဖို့ရောက်နေပါတယ်။
Domenico Berardi ရဲ့အမေအကြောင်း: မာရီယာ Berardi ရဲ့ mom, ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည် Berardi နှင့်သူ၏မောင်နှမကြီးပြင်းကူညီနေသူတစ်ဦးအိမ်ရှင်မဖြစ်ပါတယ်။ သုံး၏ထောက်ခံမိခင်လည်းဘောလုံးအတွက်အကျိုးစီးပွားရှိပါတယ်။ Sassuolo - တကယ်တော့သူမကဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းနှင့်သင်တန်း၏, သူမ၏အငယ်ဆုံးကလေးကကလပ်၏တစ်ဦးထောက်ခံသူဖြစ်ပါတယ်။
Domenico Berardi နည်းနည်းနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်အဘယ်သူကိုမိဘများအားဖြင့်ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ Image ကို Credit: ClipArtStudio နှင့် TransferMarket ။
Domenico Berardi ရဲ့မောင်နှမအကြောင်း: Berardi နှစ်ခုအဟောင်းတွေမောင်နှမရှိပါတယ်။ သူတို့ကသူ့အစ်ကို Francesco နှင့်အစ်မ Severina ပါဝင်သည်။ အများကြီးမဟုတ်မောင်နှမအကြောင်းကိုလူသိများသည်သော်လည်း, သူတို့သည် Berardi တူသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအားကစားတစ်ဦးချင်းစီမရှိကြပေ။ သို့သော်နှစ်ဦးစလုံးဘောလုံးကိုချစ်ပြီးစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူဂိမ်းလိုက်နာပါ။
Domenico Berardi ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများအကြောင်း: သူ့ဦးလေး, အဒေါ်, ဝမ်းကွဲ, တူနှင့်တူမသေးဖော်ထုတ်ခံရဖို့နေစဉ်ကွာ Berardi ရဲ့ချက်ချင်းမိသားစုကနေအများကြီးကိုမကသူ့မိခင်နှင့်ဖခင်အဖိုးအဖွားအကြောင်းကိုလူသိများသည်။
Domenico Berardi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကအချက်အလက်
Berardi ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, သူလီယိုရာသီခွင်သင်္ကေတပြနေဖြင့်ပဲ့ထိန်းတစ်ဦးချင်းစီ၏အသွက်သဘာဝကိုထင်ဟပ်ထားတဲ့အံ့သြဖွယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သူမျှမျှတတအလိုလိုသိနှင့်အမှန်တကယ်ဆင်းမြေကြီးတပြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အတန်အသင့်သည်သူ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပုဂ္ဂလိကဘဝကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဖော်ပြသသူကစားကွက်ဖန်တီးရှင်, မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဂီတနှင့်အသုံးစရိတ်အရည်အသွေးကိုအချိန်ကိုနားထောင် F1 ပြိုင်ကား, ခရီးသွား, ရေကူး, ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကိုကစားပါဝင်သည်ကြောင်းအကျိုးစီးပွားနှင့်ဝါသနာရှိပါတယ်။
Domenico Berardi F1 ပြိုင်ကားအတွက်အကျိုးစီးပွားရှိပါတယ်။ သငျသညျကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သလား ချားလ်စ် Leclerc ဓာတ်ပုံများတွင်? Image ကို Credit: Instagram ကို။
Domenico Berardi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - လူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်အလက်
မိမိအစျေးကွက်တန်ဖိုး€ 20 သန်းမှာရပ်နေချိန်တွင် Berardi စေသည်နှင့်ငွေသုံးစွဲပုံကိုနှင့်စပ်လျဉ်းသည်, မိမိအသားတင်ရကျိုးနပ်အရေးအသား၏ထိုအချိန်ကပြန်လည်သုံးသပ်အောက်မှာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Berardi ရဲ့အနည်းငယ်သာသိချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၏မဲဆန္ဒနယ်မှကသူ့လစာနှင့်ထောက်ခံချက်အပေးအယူကနေဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
အဆိုပါကစားကွက်ဖန်တီးရှင်သည်သူ၏ဇိမ်ခံကားများနှင့်အိမ်များကိုချွတ်ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံကသူ၏စည်းစိမ်ကို flaunt မှအမြန်မဟုတ်ပေမယ့်သူကသူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပိုက်ဆံနှင့်အရည်အသွေးအချိန်သုံးစွဲဘယ်မှာအပန်းဖြေဖို့စျေးကြီးတဲ့ခရီးစဉ်အောင်အပေါ်ကြီးမားသောဖြစ်ပါတယ်။
သူ့မိတ်ဆွေက Marco Benassi နဲ့စျေးကြီးအပန်းဖြေစခန်းမှာအကောင်းတစ်ဦးအချိန်ရှိခြင်း Domenico Berardi ။ Image ကို Credit: Instagram ကို။
Domenico Berardi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - မရေမတွက်အချက်အလက်
Domenico Berardi ရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝပုံပြင်နှင့်အတ္ထုပ္ပတ္တိအကောင်းဆုံးသူ့ကိုအကြောင်းကိုအောက်ပါပြောင်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်သာသိတကယ်တော့အတူတက်ခြုံ။
ဘာသာတရား: စာအရေးအသား၏အချိန်မှာမိမိယုံကြည်ချက်မှညွှန်ပြနီးပါးမျှအညွှန်းကိန်းရှိပါတယ်စဉ် Domenico Berardi ဘာသာတရားအပေါ်ကြီးမားသောမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုသို့အဖျားသူတစ်ဦးယုံကြည်သူသို့မဟုတ်မရှိမရှိဖော်ပြထားမရနိုင်ပါ။
တက်တူး: Berardi ကသူ၏ချောမောကိန်းဂဏန်းတစ်ခုလိုအပ်သောထို့အပြင်အဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်အနုပညာသတ်မှတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်မိမိလက်ဝဲလက်မောင်းပေါ်တဦးတည်းကြီးတွေတက်တူးထိုးရှိပါတယ်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးနှင်းဆီပန်းနဲ့ကြယ်ပွင့်ပေါ် Berardi ရဲ့ရှပ်အင်္ကျီအရေအတွက်ကို 25 ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးအောက်မှာကြိုးနဲ့ကျောက်ဆူးကဲ့သို့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
Domenico Berardi Tattoo တိုးတက်မှု။ Image ကို Credit: Instagram ကို။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း: Domenico Berardi အရေးအသား၏အချိန်မှာဆေးလိပ်သောက်ဖို့မသိရသည်။ ဘောလုံးပါရမီကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့အသကျရှငျထံမှနီးပါးရှိပါသည်အကျိုးကျေးဇူးများ၏ရှေ့တော်၌ပျောက်ဆုံးသွားမထားပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုအပေါ်ထိုကဲ့သို့သောလူနေမှုပုံစံစတဲ့နယ်စပ်ဘို့အကြောင်းပြချက်။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Domenico Berardi ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBogger, ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။
Daniele De Rossi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Jorginho ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်